Tag: ire ụlọ ahịa | Martech Zone
Tag: ezigbo ala na ụlọ ahịa
Mgbe anyị wuru Agent Sauce na-ejikọ saịtị, njikọta IDX, njegharị, njegharị mkpanaka, njegharị vidiyo, ozi ịntanetị, ozi SMS na mbipụta, anyị maara na ịre ahịa ọdịnaya bụ isi ihe na-eme ka ndị ahịa na-ere ahịa karịa. Na, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ikpo okwu na-ahụ oke nzaghachi kachasị na njedebe dị nso. Ọdịnaya ọdịnaya abụghị naanị okwu ọnụ ma ọ bụ ụfọdụ enweghị atụmatụ, usoro nyocha ahịa: ọ na-arụ ọrụ n'ezie. N'ezie, ire ahịa ọdịnaya egosipụtara na-ewepụta ihe dị ka
Doug kwuru na nso nso a ka njikọta na akpaaka ga-esi bụrụ isi maka ndị ahịa email. Anyị na ndị ọrụ ụlọ na-arụ ọrụ na nke ahụ bụ ihe ha na-achọ. Ihe ole na ole ị kwesịrị ịma banyere ezigbo ala: Ndị ọrụ ụlọ na ụlọ abụghị ndị ọkaibe na enweghị ngalaba IT iji kpọọ mgbe enyemaka dị ha mkpa. Ha bụ ndị ọchụnta ego, na-anabata teknụzụ ngwa ngwa, wee tụọ mmetụta ọ bụla. Ha na - abụkarị ndị ahịa ọkaibe -